Kenyan iyo Tanzaniyan u socday Soomaaliya oo lagu qabtay soohdinta – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kenyan iyo Tanzaniyan u socday Soomaaliya oo lagu qabtay soohdinta
Mareeg.com: Taliyaha Ciidanka Dowladda Soomaaliya dee Dhoobley, oo lagu magacaabo Col: Heybe Axmed Cabdulaahi ayaa sheegay iney xadka Soomaaliya iyo Kenya ku qabteen 6 nin oo kasoo kala jeeda Soomaaliya, Kenya iyo Tanzania oo doonayey iney ku biiraan Alshabaab.
Col: Heybe Axmed oo la hadlay KNN ayaa sheegay in raggana lixda ah lagu qabtay soohdinta Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan dhank Dhoobley.
Lixda ruux ayaa labo ka mid ah u dhasheen Kenya, labana waxey kasoo jeedaan Tanzania, halka labada kale yihiin Soomaali.
Sarkaalkan ayaa sheegay in ragaasi gacanta lagu dhigay ay doonayeen in ay u soo talaabaan deegaanada Al shabaab ay maamulaan si ay uga bar bar dagaalamaan Shabaabka ku suan koofurta Soomaaliya.
Col: Heybe ayaa xusay ragaasi in ay tahay markii ugu horeysay oo ay ku biiri lahaayeen balse ay ka hor joogsadeenn ciidamada dowlada ee ku sugan Dhoobley iyagoo garab ka helaya maamulka iyo shacabka Dhoobley.
Wuxuu sheegay sarkaalkaasi in raggan lala tiigsan doono sharciga. Waxaa la rumeysan yahay in xadka Soomaaliya iyo Kenya ay tilaabaan dhalinyaro badan oo Kenya ah, kuwaasoo tababaro ku qaata gudaha Soomaaliya.
Cabashada milateriga Soomaaliya ee Ceel-waaq ay ka qabaan sarkaal Kenyan ah oo korortay